बलिउड अभिनेता सलमान खान यतिबेला फुर्सदमा, फिल्मको काम नहुँदा यसरी खेतमा बिताउँदैछन् समय ! « गोर्खाली खबर डटकम
बलिउड अभिनेता सलमान खान यतिबेला फुर्सदमा, फिल्मको काम नहुँदा यसरी खेतमा बिताउँदैछन् समय !
बलिउड अभिनेता सलमान खान यतिबेला फुर्सदमा छन्। को रो ना मा हा मा रीका कारण चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा उनी फुर्सदमा देखिएका हुन्। फुर्सदमा रहेका सलमान केही समयदेखि पनवेल फार्महाउसमा समय विताइरहेका छन्। भारतमा मार्चबाट लकडाउन शुरू भएसँगै उनी फार्महाउसमा बस्दै आएका थिए। यतिबेला मनसुन शुरू भएसँगै उनी खेतीपातीमा लागेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा सेयर गरिएको भिडिओमा उनी पानीमा भिज्दै ट्याक्टर चलाइरहेका देखिन्छन्। भिडिओमा उनी कहिले ट्याक्टर चलाएर रोपाईंको खेत जोतिरहेका छन्, भने कहिले ट्याक्टरबाट बाहिर झरेर हिलो खेतमा काम गरिरहेका छन्। उक्त भिडिओ निकै भाई रल भइरहेको छ।
यसअघि उनले एउटा तस्वीर सेयर गरेका थिए। जसमा उनी पुरै शरिर माटो र पानीमा भिजेर खेतमा बसिरहेका थिए। यसको क्याप्सनमा सलमानले लेखेका थिए ‘सबै किसानहरूलाई मेरो सलाम’।उनकी बहिनी अर्पिता खान शर्मा, आयुष शर्मा, आहिल अयात, जैकलीन फर्नाडिज तथा युलिया बन्तुर पनि फार्महाउसमा छन्। अरु सबै घर फर्किसकेका छन्, भने यूलिया अहिले पनि फार्महाउसमै छन्।
यो पनि:नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्यमा सामान्य रुपमा गिरावट आएको छ ।सुनको मूल्य तोलामा रु २ सय रुपैयाँले घटेको हो आइतबार तोलामा ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य सोमवार घटेर तोलामा ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।महासंघका अनुसार सोमवार तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।यसैगरी चाँदी तोलामा १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
यो पनि: कुन देशको पैसा बढ्यो कुन देशको घट्यो हेर्नुहोस् आजको विनिमय दर। सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ यथावत रहेको छ। शनिवार कारोबार भएको ११९ रुपैयाँ ७३ पैसामै आइतबार कारोबार भयो र सोमबार पनि यथावत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।यूरोको भाउ केही पैसामात्र भएपनि बढेको छ। आइतबार १३६ रुपैयाँ ७९ पैसामा कारोबार भएको यूरो सोमबार भने १३६ रुपैया ८३ पैसामा कारोवार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११९ रुपैँया ७३ पैसा तथा विक्रिदर १२० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। यस्तै यूरोपियन यूरो १को खरिददर १३६ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा विक्रिदर १३७ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।यस्तै, यूके पाउण्ड स्ट्रलिङ १ को खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा तथा विक्रिदर १५१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर ८३ रुपैयाँ ७८ पैसा र विक्रिदर ८४ रुपैँया २० पैसा रहेको छ।
सोमबार कुवेती दिनार १ को खरिददर ३८९ रुपैयाँ ९४ पैसा, विक्रिदर ३९१ रुपैँया ९० पैसा रहेको छ। यू्एई दिराम १ को खरिददर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा, विक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । यस्तै, साउदी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ९२ पैसा, विक्रिदर ३२ रुपैया ०८ पैसा रहेको छ